एकाएक नेपाली राजनीति तरंगित, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने ओलीको प्रस्ताव ! - Nepalese Times
ओलीको पालामा जारी भएका यी ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फेरि जारी, कुन अध्यादेशमा के छ ? 21 मिनेट अघि
विदेश भ्रमणमा नजान भन्दै सरकारले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति !4घण्टा अघि
आजदेखि झनै चिसो बढ्दै, यी ठाउँमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना 13 घण्टा अघि
नेप्लिज संवाददाता ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १८:२१ (1 महिना अघि) १२७ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहे एक हप्ताभित्रै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढल्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । ओलीले किन यसो भने त ? यो बहसको विषय बनेको छ ।
हुन त उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनमोर्चामा लोभी र पापी नेता भएकोले प्रधानमन्त्री बनाईदिन्छु भन्ने बित्तिकै उनीहरुले नै यो सरकार ढाल्ने संकेत गरेका छन् ।
तर, अध्यक्ष ओलीले एमालेले चाह्यो भने एक साताभित्रै यो सरकार ढल्छ भनेर त्यत्तिकै नभनेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । पछिल्लो समय एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुबीच चुनावलाई लक्षित गरेर सहकार्यबारे छलफल भैरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ।
अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । ओलीले यसको लागि प्रचण्डसमक्ष प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि चुनावी सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेससँग नै एमालेको कडा प्रतिष्पर्धा हुने बताईरहेका छन् । माओवादीसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाँदाखेरि फाईदा हुने उनको भनाई छ । प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दा उता भर्खरै नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपाललाई पनि ठेगान लगाउन सकिने उनको ठम्याई छ ।
अहिले ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग डिल गरिरहेका छन् । एमाले र माओवादी मिल्दा नै मुलुकको हित हुने दुवै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको भनाई रहेको छ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच फेरि तत्कालै सहकार्य हुने सम्भावना कत्तिको छ रु त्यो त समयले नै देखाउला । तर, ओली र प्रचण्ड दुवैले त सार्वजनिक फोरममा तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो । राजदूत होउले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरुको विचारसहितको पुस्तकको भर्चुअल विमोचन कार्यक्रममा (यही अक्टोबर १२ तारिख ) बोल्दै यस्तो धारणा राखेकी थिईन् । रिपोर्टस नेपालबाट